Apollonius weTyana aive Kristu chaiye here? - Afrikhepri Foundation
Aiva Apollonius weTyana wechokwadi Kristu here?
min kuverenga 4 min
Panguva yaigara Kristu weVhangeri, paive nevamwe vazhinji “maKrisitu” muAsia Minor uye muPedyo East, izvi ndizvo chaizvo zvinozivisa bhuku rinonakidza, rakabudiswa naRobert Laffont nemunyori. Parisian, Egyptologist, Jean Louis Bernard. Iri bhuku, rine musoro unoti nenzira yake:
“Hupenyu hwaApollonius weTyana” nemunyori wechiGiriki Philostratus, akaberekwa muLemnos gore ra 175 AD.
Apollonius, akaberekerwa muTyana, aivewo nevadzidzi vake, vaapositori uye aive iye pachezvake mudzidzi wePythagoras uye mugari wenhaka yezvakavanzika zveEgipite. Zvinofanira kucherechedzwa kuti panguva iyoyo, izwi "Kristu" raiwanzoshandiswa: muchiGiriki, "Çhrestos" na "Christos" anoreva: "wakanaka, muzodziwa". Asi izwi iri zvakare rakatorwa nerunhare kubva kuIjipita hieroglyphic "khery-cheta". "Iye anotonga chakavanzika", "wekutanga"
Nekudaro, Apollonius aive mumwe weava vakatanga, aive mukwikwidzi akananga wevaAramaic Jesu uyo ​​rubatidziro rwechiKirisitu "rwaakabvisa". Le Petit Larousse anomuti "muzivi wePythagorean uye mushandisi wezvishamiso, uyo anonzi Philostratus anoti mashura akaiswa nevahedheni zvakafanana neyaJesu Kristu".
A mysterious cabal
Muchokwadi, Apollonius akava nemukurumbira zvekuti, iyo yainzi, "mushandi wehumambo". Nekudaro, kubva pakupararira kweEvangeri, akakandirwa mumumvuri, ukuwo Kristu wechiAramaiki akaunzwa pamberi. Chechi, nekuwedzera, yakaisa simba rayo mazviri kuburikidza nekuvimba zvisingaite paEvhangeri ina dzatinoziva (yakanyorwa kunyangwe zvakadaro kunonoka); mukuita izvi, nokuzvidira akakanganwa huwandu hwakawanda hweeapokirifa (isina kutsanangurwa!), asiri kuwirirana nehupenyu hwaJesu "sezvataishuvira", zvakanakisa, zvakazara uye zvinogutsa.
Apollonius, muzana ramakore rekutanga AD, anonzi mune yeGreco-Roman annals. Nei zvisinganzwisisike cabal chinoita kuti atumburire mukuremerwa ndizvo zvatishamisa nhasi. ChiKristu Chaive NeVaviri Vakawana? Nhau mbiri idzi dzakasanganiswa pasi pezita reumwe here? Chero zvazviri, dambudziko rekudyidzana pakati pemaviri mavara rinotora zvakanyanya kukosha.
Apollonius akatsvaga hupenyu hunoshamisa, achiyambuka metropolises yenguva yake, Roma, Alexandria, Antiokia, uye achimanikidza kutsvaga kwake kwehungwaru muEjipithiya neIndia. Hupenyu hwake zvakare anotanga neChidimbu: kuoneka kuna mai vake vamwari vemuIjipita akafanotaura kuberekwa kwemwanakomana wechimwari. Pazera ramakore manomwe, akapihwa mudzidzisi; aine gumi nemana, akaenda kuTarsus (kwaakasvika kuziva Paul), ndokuenda kuAegean kwaakadzidza kuTembere yaAsclepius uye kwaakawana chipo chake chekuporesa uye kuongororwa. Muzivi, akatanga tsika yePythagorean. Iye zvakare ari clairvoyant, mage, dhimoni dhimoni. Kwese kwaanoenda, anoita zvishamiso zvinobva kune yake yakavanzika sainzi, uye yatinoti zvishamiso. Anorarama hupenyu hwakaoma uye iye akasimbira yemichero. Anofamba asina shangu, akapfeka mucheka, uye akapfeka bvudzi refu. Parufu rwababa vake, akagovana mari yake, akaramba mukadzi. Kwemakore mashanu akapfuura achibva kuguta kusvika kune rimwe guta, achinyarara.
Ipapo akatangazve hupenyu hwevanhu, achikurudzira vamwari pamwe nevapirisiti, aine vadzidzi vanomwe parutivi rwake. Mukufamba kwake, anotora vaviri varanda uye stenograph. MuNinevhe, anosangana naDamis, muAsiria uyo achazotendeka kwaari kusvikira parufu rwake. Achienda ku Bhabhironi, anoshora gigantism iro guta rino richaita kukwana (zvakakwana kutiita kuti tifungisise pamaguta edu makuru aripo!). Pamusuwo weumambo uhwu, anobvunzwa chaanofanira kuzivisa. "Kukosha, kururamisa, kuzvidzora," anopindura. “Varanda?” tinomubvunza. "Kwete, vakadzi vakuru!". Kuna Mambo anozvigamuchira, anozivisa kuti: "Kusuruvara kukuru kushungurudza Sage kupfuura kushaya kushamisika iwe, Changamire".
Emperor Domitian, anovenga Apollonius, akamusunga ndokumusunga. Anotiza, isu tinorasikirwa nechero rake. Tinomuwana padyo neEfeso apo akafira pazera rekare. SaAramaic Kristu, anoonekwa “achishandisa chitunha” kanoverengeka uye munzvimbo dzinoverengeka, izvo zvinopedza kumuita mukurumbira pakati pevazhinji. Ane mukurumbira, zvakare akaremekedzwa, kusvika pakuti Musande John Chrysostom, anoramba achimurwisa mumuzana ramakore rechina, achimuenderera nemacolories ake uye achimudaidza, pakati pezvimwe zvinhu, munyengeri uye mutambi waSatani?
Izvo zvaive zvakafanira, pachokwadi, kuuraya uyu "Kristu" wechiGiriki, nekuda kwezvakakonzerwa, kuitira kusimbisa nekubatanidza nenzira dzose chiKristu chine mavambo akaoma.
Pepanhau "La Suisse" 1980
Musi waKurume 10, 1893, Mutungamiri weFrance akasayina mutemo wekugadzira colony yeCôte d'Ivoire
The Divine Matrix - kubatanidza Time uye Space, Miracles uye Zvavaitenda (Audio)